SOMALITALK - GUUR
W.Q. Axmed Qaasim Faarax
Guurka Wanaagsan iyo Furiinka: Xaaladda Soomaaliya
W/Q Axmed Qaasim Faarax
Wax walba uma ay fududa sida ay umuuqdaan laakiin marka iskuday lasameeyo ayaa waxa la’ogaankaraa inay sahlanyihiin iyo inay culaabtooda leeyihiin intaba. Hadaba, marka aynu kahadlayno arinta “guurka”, wajiga hore ee guurka waa uu sahlanyahay. Waayo, lamaanayaashu waxa ay isu arkaan inaysan waligood is khilaafi doonin. Balse arintu sidaa maaha, sida ay aragti (theory) oranayso, “Khilaafku waxa uu dhacaa marka ay timaado in wax lawadaago, waxa lawadaagayanna ay yihiin ‘gabawsi’ wax yar.” Waxa aynu kafahmikarnaa aragtidan in lamaanayaasha ay yihiin kuwo kuhawlan 'wax-wadaag’, sidaasi darteed, marka ay lamaanayaal isuxiisaqaba ay dhistaan hoygooda ay ugu talagaleen inay kudhameystaan inta kadhiman nolashooda wadajir iyo isxushmeyn labada dhan ah. Waxa dhacda in misena ay si lamafillaan ah kukalatagaan. Hadaba, maxaa sababa arimaha ceynkan oo kale ah? Jawaabta suaashan laguma sookoobi karo aragti qof ama labo ay kaqabaan arintan. Balse waxa ay ubaahantahay daraaseyn dheer, waqti iyo tamar in lagubixiyo. Sidoo kale, kaashigga diinta Islaamka waxa ay kaqabto arintan iyadanu waxa ay tahay mid muhiim ah. Waayo sida aynu ogsoonahayba, saxaabiggii la’oranjiray Aabii Dari, waxa uu kuladardaarmay afadiisii inay dejiso marka uu xanaaqo, isna uu falidoono sidookale marka ay u carooto afadiisa. Waxa aynu kafahmikarnaa dhacdadan diinigga ah in caradda ay tahay waxa ugu horeeya ee keenikara furiinka I.W.M. Sidaasi darteed, marka aan sikooban u iraahdo jawaabta suaashu waa, ‘dulqaad’ ay isudulqaataan lamaanayaashu hadii ay doonayaan inay sii joogteeyaan wada noolaashahooda.
1. Haweenayda waxaa loo guursadaa afar sababood b) Diin, t) Nasabiyad, j) Maal, iyo x) Qurux. (yacni afar sababood ayaa ragga ku kallifa inay haweenay doortaan) Maalkeeda, magac waynida Qoyskeeda, Quruxdeeda iyo Diinteeda. Hadaba ku guulayso inaad hesho tan diinta leh gacantaadu boorowdaye (ku dooro diinteeda faqri lagu badyaye). “waa hadal habaar u eg laakiin aan loo la jeedin habaar waa sida ( bi’i waaye) oo kale. Waxaa soo saaray xadiithkaan Al-bukhaari, Muslim, Abuu da'uud, Annisaa'i, Ibn maajah kulligood waxay ka wariyeen Abuu hureyra. kafiiri Almishkaatul Masaabiix 3082 Mukhtasaru Muslim 798.
2. (Khiyaarukum khiyaarukum linisaa’ihim ama li ahlihi) Kuwa idiinku sharafta badani waa kuwa idiinku roon haweenkooda. waxaa soo saaray Al-imamu Axmad, Tarmadi, Ibn xibbaan waxay ka wariyeen Abuu hurayre. Sidoo kale Ibn maajib can Ibnu cumar riwaayada oranaysa (Li ahlihi) waxaa soo saaray Dabaraani mucjamkiisa wayn can abii kabsha.Kafiiri Atarqiib watarhiib Juzka 3 safxada 72 sidoo kale Silsilada saxiixada 285.
Waxaa kaloo jira lafdi kale oo oranaya (khayrukum Khayrukum Li ahlihi Wa annaa khayrukum Li ahlii) Kan idiinku fiican waa kan xaaskiisa idiinku fiican, anigaana xaaskiisa idiinku fiican,waxaa soo saaray Tirmidi can Caa'isha Ibn Maajih can Ibn cabbaas Dabaraani Mucjamka wayn can Mucaawiya. Kafiiri Silsilada saxiixada 285.
Axmed Qaasim Faarax
B.A. (Hons) 3rd year
Qore: C/fataax M. Cabdulle